Haddii aad arrimaha xawaaraha iyo miisaan gaar ahaan ku saabsan tahay MP4 videos aad, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad u baahan komberesarrada video. Waxaa jira ugu sareysa 5 komberesarrada lacag la'aan ah oo aad ka faaiidaysan karaan arrintan la xiriira:
Wondershare Video Converter Free Waa Converter aad u awood badan video aad u qancisid baahidaada. Waxa ay taageertaa qaabab video kala duwan sida MP4, MKV, MOV, VOB, FLV, AVI iyo iwm Sidaa daraadeed, waxaad si fudud loogu badalo kartaa videos aan khasaaro tayo kasta iyo xitaa astaysto goobaha video sida aad jeceshahay. Sida ay xawaaraha diinta, ka dhabayso 30x ka dhaqso badan wax converters kale.
Taageer qaabab video kala duwan;
"Tirada yar" goobaha u saamaxaaya in aad cadaadin video in hal click.
Miyuu in la gaarsiiyo in Pro version haddii aad rabto in hawlaha ka badan.
Codsigan ee la socda Windows Me, XP iyo sidoo kale Vista. Si kastaba ha ahaatee, kuwa isticmaalaya Windows 7, waxaad ka heli kartaa download a free barnaamijka. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa u riixo fudud ee faylka sida oo aad si fudud u baahan yihiin in ay soo dhoofsadaan faylka barnaamijka oo mar baad u bilaabay. Isla mar ahaantaa, tayada faylka Tifaftirayaasha weli u noqon doonaa sida sare sida file asalka. Tani waa sababta oo ah barnaamijka sameeya ayna ee riixo ee kombiyuutarka.
Waxay soo saaraan riixo tayo sare leh, sababtoo ah ayna ee riixo in barnaamijka qabto kombiyuutarka;
User interface ee barnaamijka waa si caddaalad ah u fududahay.
Jenjeero mararka qaarkood inuu shil markii shaqeeyo;
Waxaa jira nooc oo kala duwan oo ah barnaamij la mid ah kaas oo noqon kara mid waxoogaa lagu dhakafaarayo.
Freeware Tani cadaadin karo faylka badan oo qaabab loo jecel yahay sida DivX, wmv, AVI, MKV, ROM iyo dhowr qaabab kale. Waxa kale oo suuragal ah in ay cadaadin files audio. Your MP4 video files xitaa lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC karaa in qaabab kaas oo noqon kara kuwo la socon kara qalabka kala duwan ee multimedia, sida qalabka Apple iyo Qalabka telefoonada gacanta ee kala duwan. Kaliya Waxaad dooran kartaa qaabka aad rabto in aad cadaadin.
Waxaad si fudud edit karaa files ka dhalatay riixo ah;
Waxaa jira kharash ah si ay u casriyayso si Version Gold ah.
Tani waa freeware oo aad bixisaa badan oo fursadaha marka ay timaado video riixo. Waxaad isku dubaridi kara tiro ka mid ah qaabab in xitaa aakhirka la MP3 files oo lagu ciyaari karo qalabka la qaadi karo aad. Sidaa awgeed, u riixo ee files MP4, arrintani waa qalab ku anfacaya.
Waxaa jira dad badan oo u qaabeynta goobaha ay suurtagal tahay la barnaamijkan. Waxaad cadaadin karo MPEG gudbiyo xataa qalabka mobile sida qalabka ciyaaraha, Qalabka telefoonada gacanta iyo iPod. Heerka riixo barnaamijkani waa fiican.
Waxaad sidoo karo hawlaha kale ee tafatirka,
An user interface fudud.
Qaabab Output in ay dhacdo files audio waxaa xaddidi kara.
Sida loo Beddelaan WMA in MP4 ama MP4 in WMA
> Resource > MP4 > Top 5 Free MP4 Best Video komberesarrada